Akụkọ - Kedu ka esi edozie ma rụkwaa ụdọ na -ebuli elu?
Kedu otu esi edozie ma rụkwaa ụdọ na -ebuli elu?
1. Ekwesighi ịkpụgharị na ịma jijiji mgbe etinyere sprocket na ogwe osisi. N'otu mgbakọ mbufe, ihu ngwụcha nke mkpanaka abụọ kwesịrị ịdị n'otu ụgbọelu. Mgbe anya dị n'etiti oghere dị ihe na -erughị 0,5m, ngbanwe nke kwere bụ 1mm; Mgbe etiti etiti sprocket karịrị 0.5m, ihe ekwepụrụ na ya bụ 2mm. Agbanyeghị, enweghị mgbagha ọ bụla n'akụkụ ezé etolite. Ọ bụrụ na wiil abụọ ahụ na -agabiga nke ukwuu, ọ dị mfe ịkpata nkewa yinye na iyi ngwa ngwa. Lezienụ anya ka ịlele ma mezie mmezi ahụ mgbe ị na -anọchi sprocket.
2. Ọ bụrụ na ọ siri oke ike, a ga -abawanye ike ike yana iburu ya ga -adị mfe; ma ọ bụrụ na ịtọghe agbụ, ọ dị mfe ịwụli elu. Mkpuchi nke eriri na -ebuli elu bụ: bulie ma ọ bụ pịa site na agbụ agbụ ahụ, anya etiti etiti sprockets dị ihe dịka 2% - 3%.
3. Ihe ejiri agbụ ígwè enweghị ike ịgwakọta ya na ụfọdụ ụdọ ọhụrụ, ma ọ bụghị ya, ọ dị mfe imepụta mmetụta na nnyefe ma mebie yinye.
4. Mgbe akwa akwa omee, a ga -edochi oghere ọhụrụ na agbụ ígwè ọhụrụ n'otu oge iji hụ na ọ dị mma. Ọ gaghị ekwe omume iji dochie anya agbụ ígwè ọhụrụ ma ọ bụ sprocket iche. Ma ọ bụghị ya, ọ ga -ebute mbinye aka ọjọọ ma mee ngwa ngwa yi akwa ma ọ bụ ihe mkpuchi ọhụrụ. Mgbe etinyere elu ezé mgbatị ahụ ruo n'ókè ụfọdụ, ekwesịrị ịgbanye ya n'oge (na -ezo aka na mkpị na -emegharị elu). Ka ịgbatị oge ojiji.
5. Chaịịịịịịịịịịịgogo ogologo ma ọ bụ gbatịa mgbe ejiri ya, nke siri ike ịhazigharị. Enwere ike wepu njikọ njikọ dị ka ọnọdụ si dị, mana ọnụọgụ njikọ njikọta ga -abụrịrị otu. Njikọ ụdọ ga -agafe n'azụ yinye, a ga -etinye mpempe mkpọchi n'èzí, oghere nke mkpọchi ga -adị n'akụkụ ntụgharị nke ntụgharị.
6. A ga -ejupụta eriri agbụga na mmanụ na -ete mmanụ n'oge. Mmanụ a na -ete mmanụ ga -abanye nzere dabara adaba n'etiti rolade na uwe ime ime iji meziwanye ọnọdụ ọrụ yana ibelata uwe.
Oge ezipụ: Jul-17-2021
Nkowa dị mkpirikpi nke Njikọ njikọ njikọ ...